Herintaona Taorian’ny Fandraràna Gazety Iray, Mbola Atao Fahirano Hatrany Ny Media Tsy Miankina Ao Oman · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2017 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Deutsch, English, Español, Italiano, English
Efa maherin'ny herintaona izao no nakaton'ny manampahefana Omeniana ny gazety tsy miankina Azamn amin'ny teny Arabo noho ny fitaterana ataony mikasika ny kolikoly ao amin'ny Soltanà. Mbola any am-ponja, mamita sazy herintaona an-tranomaizina i Yousef Al-Haj, iray amin'ireo tonian-dahatsoratry ny gazety. Tonian-dahatsoratra roa hafa ao amin'ny Azamn, Ibrahim Al-Maamari sy Zaher Al-Abri no nogadraina ihany koa ary niakatra fitsarana, saingy navotsotra ihany taty aoriana.
Ny taona maro nandritra ny fitondrana Sultan dia niavaka tamin'ny ezaka mitohy ataon'ny mpitandro filaminana, indrindra ny Sampan-draharaham-piarovana Anatiny (ISS), mba haka an-keriny ny fahalalahan'ny olom-pirenena, anisan'izany ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, ny fampijaliana sy fampitahorana ireo mpiaro ny zon'olombelona, ​​mpanao gazety tsy miankina, bilaogera sy mpikatroka hafa, ary ny fanagadrana azy ireo. Matetika mametra ireo hetsika milamina sy ara-drariny eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona ny manampahefana ary manakana ny olom-pirenena, anisan'izany ireo mpikatroka, mba tsy haneho malalaka ny hevitr'izy ireo – na an-tserasera na ivelan'ny aterineto – momba ny raharaham-bahoaka ao amin'ny fireneny toy ny kolikoly ao amin'ny sampan-draharaham-panjakana sy ny andrim-panjakana.
Nandritra ny fotoam-pitsarana tamin'ny 26 Desambra 2016, noahafahan'ny Fitsarana Ambony madiodio i Al-Haj raha voasazy herintaona an-tranomaizina kosa i Al-Haj ary enim-bolana an-tranomaizina i Al-Maamari, tafiditra ny fotoana efa lanin'izy ireo tany am-ponja. Navotsotra tao amin'ny Fonja Foibe tao Muscat i Al-Maamari tamin'ny 10 Aprily 2017 rehefa nahavita ny saziny enim-bolana, nandao an'i Al-Haj any am-ponja mbola mamita ny saziny herintaona.
Tsy ny fanakatonana ny Azamn ankehitriny sy ny fanenjehana ireo mpanao gazetiny no hany fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny gazety nitranga vao haingana tany Oman. Nisy ireo fanitsakitsahana hafa tahaka ny fanakanana ny tranonkalan'ny gazetiboky tsy miankina Mowatin sy ny faneriterena ny Albalad, gazety an-tserasera voalohany tsy miankina ao amin'ny firenena, mba hampitsahatra ny asany.
Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana sady tsy mitady tombontsoa ara-bola ny Gulf Center for Human Rights (GCHR) izay miasa manome fanohanana sy fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona (tafiditra amin'izany ny mpanao gazety tsy miankina, bilaogera, mpisolovava, sns.) ao amin'ny faritra Helodrano sy ny firenena mpifanolo-bodirindrina aminy amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahalalahana maneho hevitra, ny fikambanana sy ny fivoriana am-pilaminana. Nosoratan'ny tale mpanatanteraka ao amin'ny GCHAR, Khalid Ibrahim ity lahatsoratra ity.